Any an-dafy/eto dago/fiaraha_monina
Date: 11 septembre 2017 - 16:08
Anisan'ny safidy mpametraka eto @ forum io lohahevitra io. Tsy haiko na fijoroana vavolombelona izao ataoko izao na fitarainana fa samia mandray izay tandrify azy.
Taona vitsivitsy las aizay dia anisan'ireo mba nianagaran'ny vintana aho ka nahazo bourse hianarana tany ivelany. Nahafaly ahy no nahazo izany satria izao dia mananana olana lehibe, eny zary lasa kilema mihitsy aza.
Efa nahazoazo taona aho, nefa mbola tsy manambady. Vao tonga tany an-dafy aho dia falifaly ery afa-doza hoy aho, afaka @ enjiky ny fiaraha-moinina hoe: iny ikala lany zara, iny ikala antitra am-pijoroana sns. Naniry honina tany mihitsy aho saingy tsy nahita lalana. Tsy nahay nitsikaraka angamba e! Ankoatra izay, nefa nanahirana ahy ihany koa no niara-nonina t@ vahiny. tsy hitako izay natao t@ izany, hody velona indray ny "iny kala lany zara sy ny sisa". Hijanona, hanao ahoana ny fiainana?? Hanao ahoana ny fiaraha-miaina @ vazaha sy ny tsindritsindry isan-karazny any an_tanin'olona?
Ny hany safidy tsy maintsy noraisina dia ny fodiana taty Dago. Vao nipetraka herintaona aho dia nahazo asa stable saingy ny ataon'ny fiaraha-monina no mampahory ahy.
Ho an'ny olona sasany ny tiany ipetrahana any ivelany dia ny vola, sécurité, ny fianaran-janaka... Ho ahy kosa nefa ny "VAVA RATSIN'NY FIARAHAMONINA".
Raha ataoko nefa hoe mahita lalana iverenana any na-dafy aho, vao ho départ zéro indray lay fiainana.
Re: Any an-dafy/eto dago/fiaraha_monina
Par: TS GAS
Date: 11 septembre 2017 - 18:13
gasy zato isanjato ianao , manome lanja ny VAVAMBAHOAKA, tsy ny tany no fady eh , za ko toa anao taloha, za aza lehilahy, misy mahita lazaina foana izay atao rehetra , mankany andafy za , lazaina fa tsy ho vazaha rahoviana, fa za nga moa nitomany ho vazaha no nalehako tany,, mijanona eto za dia mahita ity vovoan alika rehetra ity , mampiaraka ,lazaina fa manala baraka, misotro , lazaina fa misotro rarakivin ny satana , tsy mankany ampiangonana , lazaina fa tsy mivavaka sns ... fa ny ahy aloha ialako tsiny fa tena nanaovako lohamboto mihitsy , izay za vao hitako hoe libre, izay tiko no ataoko , ary mahazo amiko izay miditra @ fiainako, fa taty aoriana anie ka ireo nanakiana ahy nankany ivelany, ny sasany mandefa ny zanany , ny sasany aza nifindra monina mitady lalana any mihitsy , izay no hitenenako hoe vovaan alika , tsy henoina fotsiny , dia hisy hivovo koa zao eo rehefa avy eo fa jereo
Date: 12 septembre 2017 - 19:29
TS GAS, be mitsy ny olona victime lay oe toetsaina gasy. Idikidirana daolo ny fiainany olona, ary ny mampalaelo aza mo dia entin ny gasy hatraty ampita io fomba fiaina somary masosotra io. Inona ary no tena nahatonga andramalagasy manana io toetsaina io e? Zaho zany isany fa niova otrany tsy teo ah nony tsy netraka any dago tsony, manara volotany ozy ny fitenenena.
Tsy hitako aloha zay anampiana ny tompona sujet fa dia mila manao je m en fous enao fa ts hiaino zay vavan olona rehetra eo, ary nyntena makamo ny olona akaiky sy ny havana mba natao ho namana no tena manimba lay moral
Date: 15 septembre 2017 - 21:40
tongava ,miverina départ à o andafy, sady mitsikaraka no mitady vady, betsaka ny bebe taona tsy manambady fa tsisy mifanao taimbava, ny vavan'olona aza rarahiana ,zay maasoa anao atao, mahereza
Date: 18 septembre 2017 - 10:26
Zanakandriamanitra> ndriii courage tsika e, zah koa tena miaina an'io zavatra iainanao io, te hiresaka en privée aminao aho de mba mifanohana eny e! mifampiazara traik efa... mirary soa
Date: 18 septembre 2017 - 11:03
Toe-tsaina gasy? Tsy toe-tsaina gasy io fa toe-tsaina village = olona tsy tena nahita fianarana loatra, tsy dia manana andraikitra , tsy dia afaka manana fijery mivelatra... Rehefa tsy ampy ny sainao hiresaka hevitra, na hiresaka trangan-javatra, dia momba ny olona no lasa resaka! Indrindra moa raha sahirana ara-pivelomana dia miala-vokina any @ fifosana!
Tena arakaraky ny karazan'okona mifanerasera aminao no resaka ao! Ka na ao Mada na aty ivelany dia arakaraky ny karazan'olona namana! Izay no mahatonga ny Malagasy sasany aty ivelany malina dia malina rehefa hifanerasera , ary mifidy ny malagasy ifaneraserana. (na ho lazaina aza fa miavonavona sy manava-tena izy).
Date: 29 septembre 2017 - 16:06
marna ny voalazanao, mbola be dia be ny tsy ampy solaitra , mandreraka be, fa misy ampy solaitra vitsivitsy manao ny ataony ihany fa mitandrema an
Par: efa teo sy mbola eo
Date: 28 octobre 2017 - 19:43
Ataovy izay mety @ fiainanao fa ny vavan olona tsy azo ferana.
Ho avy ny anjara fa aza mora kivy. Bn courage
Date: 24 janvier 2018 - 10:21
Fa ahoana ny fomba hahafahana mifandray fa izaho dia tsy zatra loatra ity forum ity? Ny fomba hahazoana ny mailnao? angamba kosa tsy atao public eto e!